Webiga Volga: kan ugu weyn Yurub. Dhererkeedu muxuu yahay? | Safarka Absolut
Absolut Russia | | la fahmay
Webiga Volga, waa webiga ugu weyn Yurub, oo kaalinta shanaad ku jirta dhererkeeda, marin biyoodkeedu wuxuu ku yaal galbeedka Ruushka, buuraleyda ka soo baxda waqooyi-galbeed ee Moscow waxay ku xirmaan Rybinsk Reservoir, iyo 3,530 kiilomitir oo biyo ah oo ku qulqulaya Badda Caspian.
Wabigaan waa muhiim maxaa yeelay waxay bixisaa tamarta korantada iyo biyaheeda waxaa loo adeegsadaa waraabinta xeryaha. Sannad kasta, gaar ahaan xilliga gu'ga, qaybta hoose iyo hareeraha webiga daadadkiisa roobka dartiis, laakiin xagaaga heerka biyuhu wuxuu ku dhacaa ku dhowaad webiga oo dhan.
1 Isha Wabiga Volga
2 Khariidadda jireed ee Volga
3 Macluumaad kale oo ku saabsan Webiga Volga
Isha Wabiga Volga
Webiga Volga wuxuu ka bilaabmaa togga kaynta u dhow tuulada Volgo. Wabigaan xoogga badan wuxuu u qaab eg yahay geed soo gelintiisa darteed. Tiro wabiyaal ah, durdurro iyo durdurro kale ayaa ku qulqula Webiga Volga. Wabigaani wuxuu maraa in kabadan 250 kilomitir kiloomitir oo biyo ah sanadkii. Dabeecadda awgeed wabigan wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood, mid ka mid ah oo ku yaal meesha laga soo galo illaa laga gaaro afka Webiga Oka waxaa loogu yeeraa Upper Volga, qeybta kale ee u sii gudubta Wabiga Cama waxaa la yiraahdaa Middle Volga halka Luka of Samara loo yaqaan. Volga Hoose.
Biyihiisu waxay ka soo dagaan baraf iyo roob labadaba. Webiga Volga waxaa loo yaqaan Volga Mother. Adoo maraya wabigan, waxaad sidoo kale aadi kartaa indho-indheynta oo aad ku safri kartaa maraakiibta dalxiiska, sidaa darteed waad u bogi kartaa dhammaan taallo taariikhi ah sida Kremlin-ka kaas oo ku yaal daafaha wabigaan. Webiga Volga wuxuu maraa magaalooyinka Yaroslavl, Nizhny Novgorod iyo Kazan.
Khariidadda jireed ee Volga
Hoos waxaad ku leedahay a Khariidadda jihada wabiga volga taas oo aad ka arki karto safarkiisa oo dhan min isha ilaa afkiisa Badda Caspian.
Macluumaad kale oo ku saabsan Webiga Volga
Inta badan wabiyada Webiga Volga waxay waraabiyaan dhulka Ruushka. Waxay ku kacdaa buuraha Valdaï oo kudhowaad 230 mitir oo joog ah, inta udhaxeysa magaalooyinka Moscow iyo Saint Petersburg, ka dibna waxay ku daashaa Badda Caspian
Isaga ka dib dhalashada Valdaï Hills, biyuhu waxay kusii socdaan waqooyi-bari. Waxay gaartey magaalada Tver, oo lagu dhisay wadada weyn ee u saamaxeysa isu socodka Moscow iyo Saint Petersburg, ka dibna waxay sii socotaa iyadoo la marayo muuqaal qurux badan sida biyo xireenka Ivankovo ​​iyo kaydka dambe ee Doubna. Kadib waxay usii socotaa wadadeeda woqooyi si ay u joojiso harada macmalka ah ee lagu abuuray biyo xireenka Rybinsk.
Magaaladaan, Rybinsk, waxaan ka helaynaa dekedda xasiloonida qaybta sare ee Volga. Laga bilaabo wadada dhexe wuxuu dhex maraa magaalooyin kale oo qadiimi ah sida Yaroslavl (oo la aasaasay qarnigii XNUMXaad), Nizhny Novgorod, qayb ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Mari (qayb ka mid ah Ruushka) iyo sidoo kale Kazan, oo ah caasimadda Jamhuuriyadda Tatarstan.
Qeybaha hoose ee Volga, ka hor intaanan ugu dambeyn ku dhex dhuuman Badda Caspian, webiga wuxuu ka gudbaa magaalooyin kale oo qurxoon oo leh astaamo dhaqameed aad ugu caan ah dhaqanka Ruushka, iyo taariikhdooda iyo tayadooda, taas oo dib u eegista koorsada Volga ay tahay in la magacaabo laakiin runtu waxay tahay inay u qalmaan, naftooda, booqashada dalxiiska ugu faahfaahsan. Magaalooyinka sida Saratov, oo leh astaamaheeda magaalo jaamacadeed, ama Volvograd iyo Asthrakan.
Marka lagu daro ka gudubka magaalooyin fara badan, iyo tayadaas oo ah mid caan ku ah Volga ahaanshaha si sahal ah loo raaco inta badan koorsadiisaWaxa kale oo xusid mudan tirada kooxaha asaliga ah ee gebi ahaan webiga ku noolaa. Laga soo bilaabo Merya Finish ama Mari iyo Mordves, iyo sidoo kale duulaanadii xigay ee Turkiga iyo ku biirista ku xigtay.
Volga wuxuu leeyahay taariikh illaa iyo inta uu marayo Oo kaliya markaad aragto qaar ka mid ah muuqaalka muuqaalka ah ee ay ka gudubto ayaa qalbigaaga rogmanaya oo go'aan ka gaaraya booqashada wabigan quruxda iyo taariikhiga ah ee ka gudbaya Ruushka.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan kadib, aad horey u ogtahay jawaabta su'aasha ah waa maxay wabiga ugu dheer Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Webiga volga
Aad baan u jeclahay waxaan la wadaagi doonaa asxaabteyda
Ku jawaab daniela vargas
Waxaan safar ku soo maray wabiga VOLGA, laga soo bilaabo Samara ilaa Nizhni Notgorov way i xiisay !! Bella RUSSIA
Jawaab soledad Torres
Waxaan rabaa in aan sameeyo dhibaato ka jirta VOLGA, taasi waxay ku dhaaftaa VOLGOGRADO. QOFNA MIYUU YAQAAN CIDNA?